LG V50 ThinQ 5G ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချခဲ့သည် Androidsis
အတိတ် MWC တွင် LG V50 ThinQ 5G ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ပြသ အသစ်အဆင့်မြင့်ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်နှင့် Firm ၏ 5G ကိုထောက်ပံ့သောပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။ ဒီပွဲမှာတင်ဆက်မှုပြီးတဲ့နောက်ဒီဖုန်းကိုဈေးကွက်ထဲဖြန့်ချိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိခဲ့ပါဘူး။ ဒီနွေ ဦး ရာသီ၊ Aprilပြီလလ၊ ဒါကြောင့်တောင်ကိုရီးယား၌ဖြန့်ချိခဲ့သည်အခါ။ ဥရောပမှာသူ့ရဲ့တရားဝင်ပစ်လွှတ်မှုအကြောင်းကိုဘာမှမသိခဲ့ပါဘူး။
ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလဟာလအနည်းငယ်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးတော့တရားဝင်ဖြစ်လာတယ် LG V50 ThinQ 5G ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချသည်။ ထို့ကြောင့်စပိန်နိုင်ငံတွင် 5G ပါ ၀ င်သည့်ဖုန်းအမျိုးအစားများကိုတိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ ယခုဖြန့်ကျက်မှုစတင်နေပြီဖြစ်သည် vodafone လက်.
၎င်းသည် Vodafone ၏လက်မှအတိအကျထုတ်ပြန်ခဲ့သည် စပိန်မှာရှိတဲ့ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်၏ဤဖုန်း။ စပိန်နိုင်ငံတွင် 5G ဖြင့်အော်ပရေတာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပထမဆုံးထားခဲ့သောကြောင့်။ ဒါကြောင့်သူကသူ့လက်ထဲကတရားဝင်စတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာယုတ္တိရှိပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်သီးသန့်လွှတ်တင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်အခမဲ့ရရှိမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဥရောပသည် 5G အတွက်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းရန်လောင်းသည်
1 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် LG V50 ThinQ 5G
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် LG V50 ThinQ 5G
ငါတို့ပထမနှင့်သင်တို့ကိုထားခဲ့ပါ ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်၏ဤ high-end ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်တင်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသောသူများအတွက်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီများမှကျွန်ုပ်တို့အားယခုအချိန်ထိစွန့်ခွာစေခဲ့သည့်စွမ်းအားအရှိဆုံးဖုန်းဖြစ်ပြီးဂိမ်းကစားသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည့်စံပြပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအချက်များမှာ -
အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ LG V50 ThinQ 5G Vodafone မှသာဝယ်ယူနိုင်သည်။ စိတ်ဝင်စားသူများသည်အော်ပရေတာ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်၎င်းတို့၏တရားဝင်စတိုးဆိုင်များတွင်ဤအဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့်အတိုင်း ၆/၁၂၈ GB ရှိစပိန်ဈေးကွက်သို့ဗားရှင်းတစ်ခုတည်းနှင့်ပါရှိသည်။ ဤအမှု၌အနက်ရောင်၌လည်းအရောင်တစ်ခုတည်းတွေ့ရသည်။
ဤပုံစံ၏စျေးနှုန်းသည်ရွေးချယ်မှုအပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Vodafone သည်ဖုန်းကိုငွေသားဖြင့် ၀ ယ်ရန် (သို့) အခကြေးငွေပေးရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည်။ သို့မှသာအသုံးပြုသူတစ် ဦး စီသည်သူတို့ရှာဖွေနေသည့်အရာနှင့်လိုက်ဖက်သည့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ရမည်။ ရွေးချယ်ထားသည့်ရွေးချယ်မှုသည်ဖုန်းပေါ်ရှိစျေးနှုန်းကွာခြားချက်ကိုသိသာနိုင်သည်ဟုဆိုလိုနိုင်သည်။ အဖြစ် ကုန်ကျစရိတ်သည်ယူရို ၈၉၉ မှ ၁,၅၅၀ ကြားရှိသည်ရွေးချယ်သောနှုန်းပေါ် မူတည်၍ ။ စျေးနှုန်းအတွက်အရေးကြီးသောခြားနားချက်။
ဤ LG V50 ThinQ 5G ကိုနှုန်းထားပေါ် မူတည်၍ အရစ်ကျ ၀ ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သုံးစွဲသူများကိုဤဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသောအချို့ရှိပါသည်၊ သို့မှသာဤအဆင့်မြင့်ငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသည်ပိုမိုအဆင်ပြေပါသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ယာယီဖြစ်သော Launcher Promozzjoni နှင့်ပါ ၀ င်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်မတိုင်မီဖုန်းကို ၀ ယ်ယူသူများ သင်သည် LG Dual Screen ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်, ငါတို့ MWC 2019. တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည့်ကစားစရာဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခု၊ ဖုန်းကိုမျက်နှာပြင်နှစ်ခုထားခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါယူနစ်ကန့်သတ်ထားပေမယ့်။
ဖြစ်ခြင်းအချိန်ကိုများအတွက် ဤ LG V50 ThinQ 5G သည် Vodafone အတွက်သီးသန့်ဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာသော်လည်းအခမဲ့လွှတ်တင်ခြင်းကိုမူပယ်ချထားခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၎င်းတို့တွင်ရက်စွဲများမဖော်ပြထားသော်လည်း၎င်းတွင်တိကျသောအစီအစဉ်ရှိမရှိကိုမူမသိရသေးပါ။ ထို့ကြောင့်ယခုအချိန်တွင်စိတ်ပါဝင်စားသူများသည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အော်ပရေတာကိုသာသုံးနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG V50 ThinQ 5G ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချသည်
OnePlus သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် OxygenOS သို့လာနိုင်သောအင်္ဂါရပ်အသစ်များအကြောင်းပြောဆိုသည်